Kedu otu esi achọ ụzọ kachasị mma ahịa Amazon?
Onye ọ bụla na-ere n'ahịa ahịa ahụ kwesịrị ịma otú ị ga - achọ ngwaahịa ngwaahịa, atụmatụ, yana nyochaa ọnụahịa na ịnọgide na - enwe atụmatụ aghụghọ ndị ọzọ na - egosi na e jiri ya mee ihe n'ebe ahụ. Ma olee otu esi achọta ohere ndị kwesịrị ekwesị ma chọpụta omume kachasị mma nke ndị asọmpi gị n'ejighị oge na mgbalị dị ukwuu? Dị ka ọ dị ọtụtụ ihe ị ga-eme maka gị na ọtụtụ ihe iji bulie ya na atụmatụ ntanetịahịa na atụmatụ ọnụahịa gị. Ọfọn, ọ dịghị ụkọ ngwaọrụ na ngwanrọ ịntanetị na - achọpụta ihe kachasị mma ịchọta kachasị mma nke Amazon - malite na ịzụ ahịa ngwaahịa, atụmatụ ọnụahịa, usoro nke mbupu, nzaghachi ndị ahịa, nchọpụta isiokwu, yana ụzọ kachasị mma nke nkwado ngwaahịa site na elu ndị ahịa na-aga nke ọma na ecommerce. Dị ka m kwuru, e nwere ọtụtụ puku ndị enyemaka dị iche iche dị n'ịntanetị dị na oghere oghere. Ma n'okpuru, m ga-egosi gị naanị atọ n'ime ngwaọrụ m kachasị mma. M n'onwe m jiri nhọrọ ndị a na - achọ maka ohere ịzụ ahịa Amazon - Jungle Scout, AMZ Tracker, na Akara - onye ọ bụla n'ime ha gosipụtara arụmọrụ, ya mere, ka anyị nwee obere nchịkọta dị n'okpuru.
Ngwá ọrụ mbụ ịntanetị iji chọpụta ihe ngwọta kachasị ahịa Amazon bụ Jungle Scout. M nwere ike ikwu na ị na-anwale ya tupu ihe ọ bụla iji ghọta ihe kachasị mkpa na Amazon, na ihe niche dị ugbu a maka ndị na-ere ahịa n'ebe ahụ. N'eziokwu, Jungle Scout ghọtara ọtụtụ ndị ahịa na-aga nke ọma na Amazon dịka ngwá ọrụ kachasị mma maka "nchọpụta ngwaahịa." Nhọrọ a na-ekwu maka onwe ya, na-eme ka o jiri ya mee ihe ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala ịnwa ihe mbụ gị. Ndị a bụ ụfọdụ uru ndị dị mkpa na-abịa site n'ichepụta ngwá ọrụ a: ịchọta nchekwa data maka ọnụọgụ ihe dị mkpa (ma nke gị ma ndị na-akwado gị), na-enyere aka ikpughe ohere ndị ezoro ezo ma na-asọmpi asọmnta ego, na ọbụna atụmatụ dị iche iche dị mkpa iji nwee ihe ịga nke ọma n'ịbanye na ahịa ọhụrụ.
Ngwaọrụ a na-egosi akụkụ ya kachasị ike mgbe ịchọrọ ịchọta mkpụrụ okwu ndị na-ere ahịa Amazon, jiri mee ihe maka ngwaahịa kachasị mma. N'otu oge ahụ, ngwá ọrụ a na-eme nchọpụta nke isiokwu a nwere ike inyere gị aka ọbụna nghọta bara uru karịa ezigbo nyocha ọchụchọ na ogologo-okwu mkpesa na-eji na-azụ ahịa na Amazon ọtụtụ ugboro. Tụkwasị na nke ahụ, AMZ tracker nwere ihe ngosi SEO iji gosipụta ihe a ga-eme na nchịkọta njirimara ngwaahịa gị maka nsonaazụ kachasị.
Dịka ihe eji emepụta isiokwu nke mbụ, Ihe osise jikọtara nchọpụta isiokwu na ịmepụta nchịkọta ngwaahịa. Tinyere akụkụ ndị ọzọ, onye inyeaka a n'ịntanetị dị ezigbo ukwuu ma ọ bụrụ na ị nweta njikarịcha mgbasa ozi nke PPC, chọọ ohere ọhụrụ, yana nchịkwa ize ndụ dị ize ndụ na atụmatụ data niile dị mkpa iji hụ nnukwu foto gị ahịa ọsọ na ụgwọ FBA . Enwere m ike iji ngwá ọrụ a mechie ọnụma kachasị mma nke ndị ahịa gị. - iji mepụta atụmatụ nke gị nke na-arụ ọrụ n'ezie Source .